Kitra – “Can 2021”: niresaka tamin’ireo filohana federasiona ny Fifa | NewsMada
Kitra – “Can 2021”: niresaka tamin’ireo filohana federasiona ny Fifa
Nihaona tamin’ireo filohana federasiona baolina kitra eto Afrika, tamin’ny alalan’ny vaovao ampitain-davitra ny federasiona iraisam-pirenena (Fifa). Ny ho avin’ny kitra afrikanina no tena noresahina. Araka ny vaovao hita tamin’ny tambajotran-tserasera, omaly alarobia, nisy ny fivoriambe nataon’ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny Federasiona iraisam-pirenena ny baolina kitra (Fifa), tamin’ireo filohan’ny federasiona afrikanina rehetra. Tamin’ny alalan’ny fifampiresahana ampitain-davitra na “visioconférence” no nanatontosana izany.
Fantatra fa anisan’ireo nandray anjara tamin’izany Rabekoto Raoul, filohan’ny federasiona malagasy (FMF), izay efa tsy eto an-toerana nandritra ny volana vitsivitsy fa nitsoaka any ivelany noho ny resaka fanodinkodinam-bola, tao amin’ny CNaPS. Mikasika ny ho avin’ny baolina kitra eto Afrika, indrindra ny fotoana hanatontosana ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika (Can 2021), ny tena votoatin-dresak’izy ireo.
Raha tsiahivina, tokony hotanterahina any Kameronina izany fihaonana izany, ny 9 janoary ka hatramin’ny 6 febroary, amin’ny taona ho avy. Noho ny fisian’ny valanaretina coronavirus, izay mamely ny ankamaroan’ny firenena afrikanina anefa, betsaka ireo mangataka ny hanemorana izany fihaonana izany.
Ankoatra izay, nitsahatra teo amin’ny andro faharoa ihany koa ny fifanintsanana hiadian-toerana ho an’ity Can 2021, ity. Hatreto, tsy mbola namoaka ny daty hanohizana izany fifanintsanana isam-bondrona izany ny Caf ka inoana fa anisan’ny resaka hodinihina amin’izao fifampiresahan’ny Fifa sy ireo filohana federasiona afrikanina izao.
Araka ny vaovao miely, mety hotanterahina ny fiandohan’ny taona 2022 na amin’ny fotoan’ny mainandro ity andiany faha-33 ity.